milina fanontam-pirinty CI lehibe
Fanoloana 1 set ny Plate Roller (roller taloha tsy nesorina, nametraka roller vaovao enina taorian'ny fanamafisana), 20 Minute fisoratana anarana ihany no azo atao amin'ny fanontana.
Maximum milina famokarana haingana ny 200m/min, fisoratana anarana marina ± 0.10mm.
Tsy miova ny fahamarinan'ny overlay mandritra ny fampiakarana haingana ny hazakazaka miakatra na midina.
Ny tsipika famokarana manontolo avy amin'ny reel hametraka ny vokatra vita mba hahatratrarana ny famokarana mitohy tsy miato, hampitombo ny vokatra vokatra.
MODELY CHCI-E (Azo amboarina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny famokarana sy ny tsena)
Max.Web Width 650mm 850mm 1050mm
Max.Sakan'ny fanontana 550mm 750mm 950mm
Haingana fanontana 250m/min
Max.Atsaharo/Avereno Dia. φ800mm
Fiara afovoany tokana, miaraka amin'ny motera servo, fanaraha-maso Inverter Closed-loop.
Fanaraha-maso ny fihenjanana: Ampiasao ny roller float Light.fanonerana fiara fihenjanana, fanaraha-maso akaiky.
Rindran-drivotra entana entana.
EPC (fanaraha-maso ny toeran'ny sisiny): Mametraka sy mampandeha automatique EPC karazana horonam-peo efatra ho azy;Miaraka amin'ny asa famerenana amin'ny tanana / mandeha ho azy / afovoany, afaka manitsy ny havia sy havanana manodidina ny ± 65mm ny sakany.
Isan'ny fanontam-pirinty: 4/6/8
Fomba fiara: Gear Drive
Motor mitondra : Servo Motor drive ;Inverter fanaraha-maso akaiky loop fanaraha-maso
Fomba fanontam-pirinty: 1) Plate -Phopolymer plate;2) Ranomainty--rano fototra na ranomainty solvent
Famerenana fanontana: 400-900mm
Gearing ny fanontana cylinder: 5mm
Lelan'ny efitra 4/6/8 pcs
Samy fomba lelany aluminium firaka boaty ranomainty.
Mihidy tanky ranomainty (fampiasana fanafarana tany am-boalohany 30-60 andro).
Manokatra sy manidy ny lelany amin'ny alàlan'ny manual (Safety).
Misy efitranon'ny dokotera ho an'ny fanovana haingana.
Izy io dia vita amin'ny firaka Aluminum sy karazana mihidy mba hampihenana ny volatilization solvent ary hitazona ny ranomainty amin'ny viscosity tsara sy madio.
Misy dokotera mandroso sy miverina ao anaty efitrano.Ny dokotera mifamadika dia natao hamehezana ny efitrano ary ny dokotera mandroso dia ho an'ny fandrakofana ny ranomainty.
Amponga afovoany lehibe
Endriky ny milina fanontam-pirinty afovoany miaraka amin'ny hafanana tsy tapaka.
Fanaraha-maso marina: ao anatin'ny ± 1 ℃
Savaivony: Ф 1200mm/1600mm
Ny amponga afovoany dia manangana banga miaraka amin'ny rafitra roa sosona, vita amin'ny vy firaka ambony sy ny fitsaboana fifandanjana mavitrika ary ny fitsaboana amin'ny electroplated mba hahatonga ny endrika tsy misy etching.
Ny amponga manaitra afovoany dia mampiasa roller andalana avo roa heny mazava tsara.
Fanamainana eo anelanelan'ny loko tsirairay
Fanafanana elektrika, niova ho fanafanana rivotra mivezivezy amin'ny alàlan'ny mpanakalo hafanana.Ny fanaraha-maso ny mari-pana dia mampiasa fanaraha-maso mari-pana manan-tsaina, fifandraisana matanjaka tsy misy fifandraisana, mametraka fanaraha-maso 2, mifanaraka amin'ny teknolojia samihafa, famokarana tontolo iainana, mitsitsy angovo, mampihatra ny fanaraha-maso ny mari-pana PID sy ny fanaraha-maso ny mari-pana, ± 2 ℃.
Boaty maina eo anelanelan'ny loko tsirairay dia manana windleitung sy fantsona rivotra miverina.
Stainless vy fonony, aluminium firaka famafazana nozzle.
Fomba rivotra mafana: fanafanana elektrika, niova ho fanafanana rivotra mivezivezy amin'ny alalan'ny hafanana exchanger.Ny fanaraha-maso ny mari-pana dia mampiasa fanaraha-maso mari-pana manan-tsaina, fifandraisana matanjaka tsy misy fifandraisana, mametraka fanaraha-maso 2, mifanaraka amin'ny teknolojia samihafa, famokarana tontolo iainana, mitsitsy angovo, mampihatra ny fanaraha-maso ny mari-pana PID sy ny fanaraha-maso ny mari-pana, ± 2 ℃.
Fanamainana ny rafitra lafaoro
Lafaoro fanamainana fitoeran-javatra anatiny.
Ny muzzle dia vita amin'ny takelaka vy tsy misy pentina.
Ny lafaoro maina dia manana mpankafy tsy miankina ho an'ny rivotra miditra ary mpankafy tsy miankina ho an'ny setroka rivotra.Amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny famatsiana rivotra tahan'ny sy hanitsy rivotra damper, ny milina fanontam-pirinty dia hahazo ny tsara indrindra rivotra hafainganam-pandeha, rivotra fanerena, ambony fanamainana lafaoro hafanana fahombiazana, ary hamonjy angovo fanjifàna;Ny cylinder dia mifehy ny fanokafana sy fanakatonana lafaoro fanamainana, miaraka amin'ny bara fiambenana sy ny gorodona.
Ny vondrona iray dia mampiasa rewind afovoany, motera servo, fanaraha-maso mihidy inverter.
Fanaraha-maso ny fihenjanana: manaova roller mitsingevana maivana be, ary fanonerana mandeha ho azy ny fihenjanana, fanaraha-maso mihidy.
milina fijanonana mandeha ho azy rehefa tapaka ny fitaovana;Rehefa mijanona ny masinina, tazony ny fihenjanana ary ialao ny fitaovana mivelatra na mivily tsipika.
Rafitra fanaraha-maso static sary
Antony fanitarana: 3-30（Faritra fanitarana）
Fomba fampisehoana: Ecran feno
Elanelanelan'ny fakana sary: ​​nofaritan'ny PG encoder/gear sensor toerana famantarana.
Fakan-tsary fanaraha-maso hafainganam-pandeha: 1.0m/min
Fanamarinana isan-karazany: miankina amin'ny sakany ara-nofo, arbitrarily fametrahana.Mety ho an'ny fanaraha-maso teboka azo amboarina na mandeha ho azy miverina sy miverina.
teo aloha: 8 loko CI flexographic milina fanontam-pirinty ho an'ny plastika sarimihetsika
Manaraka: 4 loko CI flexo milina fanontam-pirinty ho an'ny taratasy plastika
Big Ci Flexo milina fanontam-pirinty
milina fanontana Ci Flexo
milina fanontana Ci Flexo ho an'ny plastika
4 loko CI flexo milina fanontam-pirinty roll to roll...